Cuntada: Sidee loo xakameynayaa internetka adda Internetka?
Wax kasta oo ay dadku ku qabtaan internetka si sahlan ayaa loo raad raaci karaa, shirkadaha internetka waxay ururiyaan macluumaad badan oo ku saabsan macaamiishooda maalin kasta. Waxay isticmaalaan xogtan si ay u iibiyaan alaabooyin kala duwan oo bartilmaameedsanaya dhagaystayaasha saxda ah. Waxa kale oo loo isticmaalaa in lagu soo diro farriimaha suuq-geynta shakhsi ahaaneed iyo kuwa la beegsanayo markaad riixdo World Wide Web. Waa ammaan in la yiraahdo raadinta internetku waxay kor u qaadday welwel badan oo qarsoodinimo ah bilihii la soo dhaafay
Ma helno xogta shirkadaha oo dhan, laakiin waxay ururiyaan macluumaadkayaga maalin kasta. Xitaa ma ogaanno sida loo adeegsado adeegyadooda iyo nooca alaabooyinka ay bixiyaan
Ivan Konovalov, oo ah xirfadle sare oo ka socda Semt , wuxuu xaqiijinayaa in inta badan nidaamyada raadraaca internetka ay yihiin kuwo aan khatar ahayn oo loo adeegsan karo si loo ogaado xatooyada iyo internetka internetka
Sidee ayuu u shaqeeyaa internetka raadinta shaqada
Kukiyada iyo khadka tooska ah ee internetka ayaa ah laba arrimood oo waaweyn oo ku saabsan internetka. Xayaysiisyada ka muuqda boggaga internetka, mashiinka ayaa mas'uul ka ah inuu duubo waxyaabaha isticmaalayaasha ah ee riixaya, geli mar hore oo rikoodh - harb company lebanon. Waxaa loogu yeeraa nidaamka raadraaca raadinta iyo waxaa loogu talagalay in lagu qiimeeyo wax-ku-oolnimada iyo faa'iidada xayeysiinta. Bilihii ugu dambeeyay, nidaamkani waxa uu ku guuleystay guusha weyn, markabkana aad iyo aad u badan ayaa soo jiidanaya.
Kukiyada saddexaad ee la soo gaabiyo waxay la socotaa qeyb weyn oo ka mid ah nidaamka raadinta ad. Faylasha yaryar waa dukaamada daalacayaasha webka ee ka caawinaya inay tilmaamaan bogagga aad ugu badan tahay. Macluumaadkaaga iyo URL-yadu waxay ku kaydsan yihiin maalin kasta, kakoobyadu waxay ka yimaadaan sawirro muuqaal ah, xayeysiiska internetka, iyo boggaga aad jeceshahay inaad booqato.
Waa in aad maskaxda ku haysaa in macmacaanku yahay mid wanaagsan oo xun. Iyaga oo aan lahayn, bogag kala duwan sida Facebook, Amazon, eBay, iyo kuwa kale si toos ah looma helayo. Kukiyada waxay ku kaydiyaan macluumaad faa'iido leh oo ku saabsan adeegahaaga, ka caawinta meheradaha inay hagaajiyaan adeegyadooda oo ay ku siiyaan shakhsi ahaan iyo khibrad ka badan sidii hore.
Qaar ka mid ah cookies, si kastaba ha ahaatee, waxaa loogu talagalay inay ka caawiso xayeysiinta. Waxay ku tiirsan yihiin macluumaadka la ururiyey ee ku jirta koobiyadan. Tusaale ahaan, Google DoubleClick wuxuu diiwaan geliyaa jaangooyooyinkaaga iyo profilesada si aad u ogaatid xayaysiinta iyo xayeysiinta ku haboon goobahaaga ugu badan.
Xayiraadda Raadinta Shaacinta Internetka
Marka la eego nooca shabakadda dunida oo dhan, waxaa laga yaabaa inaysan macquul ahayn in la diido keegyada. I aamin, waa waqti-qaadashada iyo mid ka mid ah geeddi-socodka ugu xanaaq badan. Weli waad joojin kartaa kakabka xayeysiinta adigoo diidaya barta shabakadaada.
Guddiga Ganacsiga ee Federaalka iyo hay'adaha kale ee dawladdu waxay dejiyeen sharciyo iyo xeerar. Labada Yahoo iyo Google labadaba waxay ku darsameen badhanka "Opt Out" iyo hawlaha maareynta asturnaanta ee xisaabaadka isticmaalkooda
Si aad suurtagaliso ikhtiyaarkan, waa inaad tagtaa Gmail ama xisaabta Yahoo iyo hubi Xarunta Khaaska ah ee Google ama Maamulaha Macluumaadka Macaamilka Yahoo. Halkan, waxaad ka heli doontaa badhanka "Option" badhkeed oo ay weheliso badhado kale. Waad riixi kartaa badhanka oo waxba ha ku samayn wax kale. Haddii aad qabtid waxoogaa jahwareer ah, waa inaad eegtaa bogagga caawimaadda boggaga internetka
Habee Beddelkaaga Browser
Dareemayaal kala duwan ayaa leh goobo la dhiso si ay u joojiyaan kakoobyada gaarka ah iyo botnets in lagu rakibo nidaamkaaga. Haddii aadan rabin inaad kobciso cookies, waa inaad hagaajisaa goobahaaga browser iyo joojiso nidaamka raadinta ad-gashiga ah inaad ka diiwaangeliso wax kasta oo aad ku sameyso internetka. Waa inaad sidoo kale ka saartaa xogta guud ee la heli karo sida ugu dhakhsaha badan. ReputationDefender waxay macaamiisheeda siineysaa adeegyo ilaalin oo sir ah oo asaasi ah waxayna hubisaa in aysan macquul ahayn in shirkadaha webka iyo shirkadaha ay helaan macluumaadkaaga internetka.